Ukubuyisela kanye nelungelo lokuhoxa - THE INDIAN FACE
Returns kanye nelungelo lokuhoxiswa
1. Imbuyiselo yokukhiqiza amaphutha.
Umsebenzisi angabuyela ku- THE INDIAN FACE, noma yimuphi umkhiqizo oveza iphutha lokukhiqiza. Ngokubheka uhlobo lemikhiqizo esetshenzisiwe, uMsebenzisi uzoba nesikhathi senyanga eyodwa ukuxhumana naye THE INDIAN FACE ukuswela kwayo ukuvumelana nazo. Uma le nkathi idlulile, noma imuphi umonakalo uzothathwa ngumsebenzisi.
Ukwenza imbuyiselo ibe semthethweni, uMsebenzisi kufanele axhumane THE INDIAN FACE kungakapheli isikhathi esingangenyanga eyodwa, ekhelini lokuxhumana naye theindianface .com, ekhombisa umkhiqizo noma imikhiqizo okufanele ibuyiselwe, ifaka isithombe kanye nohlu olunemininingwane yezinkinga ezitholakala lapho
Kanye THE INDIAN FACE ukutholile ukuxhumana okuvela kuMsebenzisi, kuzokwazisa kungakapheli izinsuku ezingama-3-5 zebhizinisi ukuthi uwubuyisele umkhiqizo noma cha. Uma kwenzeka ukubuyisa kuqhubeke, THE INDIAN FACE Kuzobonisa kuMsebenzisi indlela yokuqoqa noma ukuthumela umkhiqizo onenkinga emahhovisi / ezindaweni zawo zokugcina.
Umkhiqizo ngamunye okufanele ubuyiselwe kumele ungasetshenziswanga futhi ngawo wonke amalebuli awo, ukupakishwa futhi, lapho kufanele khona, imibhalo kanye nezinto zokwengeza ezafika nazo. Uma uMsebenzisi engaqhubeki ngale ndlela, THE INDIAN FACE ligodla ilungelo lokwenqaba ukubuyiselwa.
Lapho umkhiqizo usutholakele futhi kuqinisekisiwe iziphene, THE INDIAN FACE Izonikeza uMsebenzisi ithuba lokuthi abuyisele umkhiqizo ngenye yezici ezifanayo, ngaphandle kwalapho le nketho ingenzeki noma ingalingani THE INDIAN FACE.
Esimweni lapho ngenxa yokuntuleka kwesitoko, omunye umkhiqizo onezimpawu ezifanayo awukwazanga ukuthunyelwa, Umsebenzisi angakhetha ukuqeda inkontileka (okungukuthi, abuyise amanani akhokhelwe) noma acele ukuthunyelwa komunye umodeli umsebenzisi ukhetha ngokuzithandela.
Ukulethwa komkhiqizo okunezimpawu ezifanayo noma imodeli entsha ekhethwe ngumsebenzisi, kufanelekile, kuzokwenziwa ngezinsuku zebhizinisi ezilandelayo ezinhlanu kusuka ngosuku THE INDIAN FACE Umsebenzisi uzoqinisekisa ukufakwa esikhundleni komkhiqizo onenkinga noma ukuthunyelwa kwemodeli entsha.
Ukuphindisela, ukuthumela imodeli entsha noma ukunqanyulwa kwenkontileka ngeke kusho izindleko ezengeziwe zoMsebenzisi.
Uma uMsebenzisi enqamula inkontileka, THE INDIAN FACE izokwenza ukubuyiswa kwayo yonke imali ekhokhelwe uMsebenzisi yokuthengwa komkhiqizo onephutha.
THE INDIAN FACE yazisa Abasebenzisi ukuthi ithemu lokubuyiselwa kwamanani akhokhelwayo lizoya ngendlela yokukhokha uMsebenzisi ayengayisebenzisa lapho uthenga umkhiqizo.
Esimweni lapho uMsebenzisi engagculiseki ngemikhiqizo etholwe nge-oda lakhe, uMsebenzisi, ngokuhambisana noMthetho Jikelele wokuvikela abathengi nabasebenzisi, uzoba nesikhathi sezinsuku eziyishumi nane (15) zekhalenda ukubuyisa ingqikithi we-oda noma, uma uthanda, ungabuyisa noma yimiphi imikhiqizo eyenza i-oda eliphelele nakho konke ngaphandle kwesijeziso futhi ngaphandle kwesidingo sokukhombisa izizathu.
Kodwa-ke, umsebenzisi kufanele athwale izindleko eziqondile zokubuyela ku THE INDIAN FACE, noma ngabe ubuyisela i-oda ngokugcwele noma unquma ukubuyisa eminye imikhiqizo ku-oda.
Ukwenza i-Return yakho ibe semthethweni, kufanele uthinte THE INDIAN FACE ekhelini othintana nalo theindianface .com, ngokuthumela ifomu eligcwalisiwe lokuhoxa elihambisana nale Migomo Nemibandela njengeSITHASISELO 1. Ngemuva kokuthola ukuxhumana okushiwo, THE INDIAN FACE Kuzobonisa indlela yokuthumela i-oda emahhovisi ayo noma ezindaweni zokugcina izimpahla.
THE INDIAN FACE ayinasibopho senkampani yokuhambisa izincwadi ukuthi umsebenzisi uqasha ukubuyisela i-oda. Ngalo mqondo, THE INDIAN FACE kuncoma uMsebenzisi ukuthi funa inkampani yokuhambisa izincwadi ukuthi ikunikeze ubufakazi bokwethula uma ngabe izikhulu zidlulisela umkhiqizo emahhovisi THE INDIAN FACE, ukuze Umsebenzisi azi ukuthi umkhiqizo uhanjiswe kahle THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE ayinankinga nekheli lapho uMsebenzisi athumela i-oda lokubuya. Kufanele ngaso sonke isikhathi kube ihhovisi lethu esimweni saseYurophu. Uma besingenaso isiqinisekiso sokulethwa futhi umsebenzisi akazange aveze irisidi lokulethwa, THE INDIAN FACE bebengeke babhekane nokulahleka futhi kungaba ngumsebenzisi obezodinga ukuthi afake inkampani yezokuthutha eyayinenkontileka.
Izindleko zokubuyisa i-oda (njengezindleko zokuthumela ngokusebenzisa izinkampani zokuhambisa) zizothwalwa ngqo nguMsebenzisi.
Umkhiqizo kumele ungasetshenziswanga nangawo wonke amalebula awo, ukupakishwa futhi, lapho kufanele khona, imibhalo kanye nezinto zokwengeza ezafika nazo. Uma uMsebenzisi engaqhubeki ngale ndlela noma umkhiqizo uhlukumezekile, uMsebenzisi wamukela ukuthi umkhiqizo ungahle wehliswe noma lokho THE INDIAN FACE ukubuya kunganqatshwa.
Kanye THE INDIAN FACE hlola ukuthi i-oda lisesimweni esihle, THE INDIAN FACE izoqhubeka nokubuyisa inani eliphelele olukhokhelwe nguMsebenzisi.
Uma umsebenzisi enquma ukubuyisa i-oda ngokugcwele, THE INDIAN FACE izobuyela kuMsebenzisi onke amanani ebengazokhokha wona futhi uma ebuyisa kuphela eminye imikhiqizo, ingxenye kuphela ehambisana naleyo mikhiqizo izobuyiselwa.
THE INDIAN FACE yazisa Abasebenzisi ukuthi ithemu lokubuyiselwa kwamanani akhokhelwayo lizoya ngendlela yokukhokha uMsebenzisi ayengayisebenzisa lapho uthenga umkhiqizo. Kunoma ikuphi, THE INDIAN FACE izobuyisa amanani akhokhelwe ngokushesha okukhulu futhi, kunoma yikuphi, kungakapheli izinsuku eziyi-14 zekhalenda ngemuva kosuku lapho umkhiqizo obuyisiwe wamukelwe khona.
Inqubomgomo Yokushintshana Ngomkhiqizo
THE INDIAN FACE aluvumi ushintsho phakathi komkhiqizo othengwe Umsebenzisi ngomunye umkhiqizo onikezwa kwiwebhusayithi.
Esimweni lapho uMsebenzisi efuna ukwenza ushintsho kumkhiqizo, kufanele asebenzise ilungelo lakhe lokuhoxisa ngokufana nalolo olusungulwe kwisigatshana 6.2 futhi kamuva athenge umkhiqizo omusha abawufunayo.